जिन्सको पाइन्ट किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् - pnpkhabar.com
You are at:Home»बिबिध»जिन्सको पाइन्ट किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
By मनिषा थापा on ३० भाद्र २०७५, शनिबार ०५:३१ बिबिध
अहिलेको युवाको लागि जिन्सको पाइन्ट फेसन मात्र हैन, आवश्यकता नै बनिसकेको छ । अहिलेका युवाहरु कमै होलान्, जो जिन्सका कपडा लगाउँदैनन् । जिन्सको कपडा सदाबाहर र सबैलाई मनपर्ने भएकोले यसको खपत विश्वभरी नै हुन्छ । जिन्स खरिद गर्दा केही कुरामा ध्यान दिन सकियो भने यो परिधानले तपाईलाई फाइदा पुग्न सक्छ । आज हामी तपाईलाई केही यस्ता टिप्सको बारेमा बताउँन जादै छौ जुन किन्दा सबैभन्दा बढी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता छन् टिप्सहरु…
१. यदि तपाई अफिस वा पार्टीको लागि जिन्स खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने कहिल्यै पनि कडा रंगको जिन्स नलिनुुहोस् ।
२. जिन्स खरिद गर्दा तपाईले सधै आफ्नो व्यक्तित्व विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईको कम्मरमुनिको भाग र फिलामा मासु पुष्ट छ भने तपाईले एक्सट्रा लो वेस्ट जिन्स चयन गर्नु हुँदैन । यस्तो समयमा सधै मिड वेस्ट वा हाई वेस्ट जिन्स चयन गर्नुहोस् । यसले तपाईलाई स्टाइल र कम्फर्ट दिन्छ ।
३. तपाईलाई प्लेन जिन्स मन पर्ने भएपनि कहिले काँही फरक स्टाइलले पनि तपाईलाई सुन्दर देखाउँछ । तपाई गेट टुगेदर वा डे पार्टीको लागि लेटेस्ट ट्रेण्डमा रहेका जिन्सहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ।
४. एकै प्रकारको वा एकै रंगका जिन्सहरु कहिल्यै पनि खरिद नगर्नुहोस् । समय अनुसार जिन्स खरिद गर्नुहोस् । अफिस, पार्टी, आउटडोर सबैका लागि अलग अलग चयन गर्नुहोस् ।
५. जिन्स खरिद गर्दा कपडामा जरुर ध्यान दिनुहोस् । कतिपय अवस्थामा तपाई डिजाइनरबाट प्रभावित भएर जिन्स लिनुहुन्छ तर त्यसको फैब्रिक राम्रो नहुन सक्छ । कपडालाई छोएर, एकपटक लगाएर र त्यसको कम्प्याटिबिलिटि चेक गरेर मात्र खरिद गर्नुहोस् ।
६. कटन मिक्स र लाइनन मिक्स जिन्स सजिलो साथ साथै परफेक्ट लुक्स दिन्छ ।
१ आश्विन २०७५, सोमबार ०७:०१ 0
यसरी बाक्लो बनाउनुहोस् आफ्नो आइब्रो आकर्षक !
३१ भाद्र २०७५, आईतवार ०९:५२ 0
आफ्नो राशीअनुसार कोसँग विवाह गर्दा उत्तम हुन्छ ?
१९ चैत्र २०७४, सोमबार ०१:३४ 0
हेर्नुहोस जम्मा ४८ लाखमा २४ घण्टामा बनाइयो यस्तो शानदार घर